Sidee Loo Sameeyaa Thumbnail Youtube? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo sameeyaa thumbnail Youtube?
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 358
Ma maqashay wax ku saabsan thumbnails YouTube maxayna u yihiin? Tani waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee ay tahay in la tixgeliyo markii la soo gelinayo wax kasta oo ka mid ah barxadda oo ay kasbadaan macaamiil badan. Baro sida loo sameeyo thumbnail-ka ugu wanaagsan YouTube-ka iyada oo loo marayo qodobka soo socda.
Thumbnails way awoodaa samee fiidiyowgeena la soo geliyay Youtube si aad u hesho aragtiyo badan, marka lagu daro bixinta muuqaal muuqaal badan oo soo jiidasho leh oo xiiso leh kanaalkayaga. Raac talaabooyinkan si aad u sameyso shaxan asal ah, oo cajiib ah.
Maxay yihiin thumbnails YouTube
Xaqiiqdii waad aragtay laakiin magacan kumaqaanid. Thumbnail Youtube waa sawirkaas oo la socda cinwaanka fiidiyow kasta kaas oo ka laalaada barnaamijkan.
Muuqaallo yaryar u adeegso si loo aqoonsado fiidiyaha, laakiin sidoo kale in la soo jiito dareenka isticmaalaha kahor inta aysan gujin. Waxay ka muuqan karaan dhowr qaybood:
Dhinaca midig ee sadarka fiidiyowyada la soo jeediyey
Natiijooyinka baaritaanka guriga Youtube
Maxay yihiin thumbnails YouTube?
Thumbnails for YouTube waxay u adeegaan, iyo waxyaabo kale, inay cadee fiidiyoow lagu dhajiyay barxadda. Iyada oo loo marayo sawirkan yar, isticmaaleyaashu waxay fikrad kooban ku yeelan karaan waxa fiidiyowgu ku saabsan yahay ka hor intaadan gujin.
Sababtaas awgeed, waa inaan isku daynaa samee thumbnail wanaagsan Youtube, kaliya maahan hal abuur iyo asal, laakiin taasi waxay u hogaansameysaa xaddidaadyo gaar ah oo naga caawin doona inaan abuurno waxyaabo muuqaal ah oo wanaagsan.
Dhinacyada la tixgelinayo marka la samaynayo wax yar
Waxaa jira dhowr dhinac oo ay tahay in la tixgeliyo markii la abuurayo thumbnail Youtube. Waa kuwan qaar ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee maskaxda lagu hayo:
Youtube wuxuu sheegayaa in cabirka ugu fiican ee thumbnail ay tahay inuu noqdo 1280 x 720. Intaas waxaa sii dheer, waxay kugula talineysaa inaad ku keydiso sawirka jpg ama qaabka png, in kastoo mararka qaarkood ay aqbasho qaabab sida gif ama bmp. Waxa ay tahay inaad iska ilaaliso ayaa ah in thumbnail uu ka weyn yahay 2MB.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan marka la samaynayo gabagabo waa inuu ku saabsan yahay halabuurka sawirka qaadi doona. Waad ku dari kartaa qoraal, calaamado-biyood ama sawir keliya. Wax walba waxay ku xirnaan doonaan dookhaaga, male iyo hal-abuurkaaga.
Samee waxyaabo hal abuur leh
Thumbnail-ka YouTube-ka waa inuu ka sarreeyaa dhammaan asal ah oo hal abuur leh. Xusuusnow inay noqon doonto warqadda daboolka ee fiidiyowgaaga inta aysan dusha ka saarin. Isku day inaad isticmaasho qoraallo waaweyn iyo sawirro u muuqda kuwo indhaha soo jiidasho leh. Iftiinka ayaa ka sii fiican.
Sida loo sameeyo thumbnails on mobile
Waxaa jira barnaamijyo iyo codsiyo badan in aan u isticmaali karno sameynta thumbnails YouTube, tusaale ahaan Photoshop. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo kale oo beddel u muuqda oo xitaa u xiiso badan waxa noocan ah, oo ay ku jiraan Instagram iyo Conva.
Talaabooyinka aad ku soo gelineyso thumbnail kanaalkaaga YouTube
Tag meesha Qalabaynta ee fiidiyowga
Halka ay ku qoran tahay thumbnail dhagsii tag, oo diyaar ah.
1 Maxay yihiin thumbnails YouTube
2 Maxay yihiin thumbnails YouTube?
3 Dhinacyada la tixgelinayo marka la samaynayo wax yar
4 Sida loo sameeyo thumbnails on mobile
Sideen ku arki karaa sheekooyinka Instagram iyaga oo aan dareemin?
Sidee loo dhaqaajiyaa qaabka mugdiga ah ee Telegram?